Deakin University - Waxbarashada Sare ee unviersities Australia
aasaasay : 1974
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Deakin
Qor at University Deakin
Deakin University waa jaamacad dadweynaha iyada oo ku dhowaad 50,644 ardayda tacliinta sare ee 2014. dhidibada loo aasay 1974, Jaamacadda ayaa loo magacaabay ka dib markii hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa xiriirka Australia iyo Ra'iisul Wasaaraha labaad ee qaranka, Alfred Deakin. Waxay leedahay xarumood ee Geelong, Warrnambool iyo Burwood, Melbourne iyo barashada xarumood ee Dandenong, Craigieburn iyo Werribee, oo dhan ee gobolka of Victoria. Waxaa la aasaasay si rasmi ah u 1974 la marinkii oo ka mid ah Sharciga Jaamacadda Deakin 1974. sale The ofStonnington guri nagaadi xanaajiyeen caro dadweyne sida ay ku lug guri nagaadi ah taas oo ahayd halis ah dibu dhiska by guryaha dhisa. Deakin waa mid ka mid ah ugu dhaqsiyaha badan sii kordhaya jaamacadaha cilmi Australia. Its maalgelinta cilmi weheliso ayaa kor uga A $ 4.5 million ee 1997 A $ 43.4 million in 2014.
Iyada oo ay ajandaha NOOSHAHAY mustaqbalka, Deakin ay higsaneysaa in ay dhistaan ​​shaqo ee mustaqbalka, isticmaalaya fursadaha da'da digital ballaaranaya helitaanka waxbarasho iyo kala bulshooyinka ay u adeegto.
Deakin jecel yahay sumcad sida isagoo la heli karo, waxtar iyo saaxiibtinimo. Waxay leedahay rikoor muddo dheer ay u isticmaalka technology macluumaad goynta-ku laayeen halka bixinta waayo aragnimo heer sare ah shakhsi, haddii daruurta xarumaha warbaahinta-hodan Deakin ama isku jira daruur iyo campus waxbarashada.
Deakin leedahay in ka badan 53,000 ardayda, ku dhawaad ​​rubuc ka dooratay in aad ka barato, daacad daruurta (online).
Deakin waxaa lagu abaal 5-star rating ah ururka darajayn jaamacadaha haybadda leh ee Quacquarelli Symonds (QS); rating waxay muujinaysaa Deakin waa heer caalami ah ballaaran ee meelaha, ayaa goobaha goynta-ku laayeen oo caalami ah waxay caan ku tahay in ay cilmi-baarista iyo waxbarashada.
The 2015 Ciidmada Shanghai Jiao Tong Academic of Jaamacadaha Adduunka(ARWU) kaalinta University Deakin ka mid ah hogaanka 400 jaamacadaha adduunka. darajayn barbardhigay saameyn cilmi-kun oo hay'adaha tacliinta dunida oo dhan iyo waxa uu leeyahay si gaar ah diiradda on sayniska. Waayo, jaamacad dhallinyarada sida Deakin oo ah cilmibaarisyadii u kala duwan oo ay ka buuxaan edbiyo oo uu leeyahay diiradda xoog on heer sare baridda, darajayn wuxuu muujinayaa balan-socda Deakin ee ku sii kordhaya cilmi dunida caan ka.
Saf Deakin 36 in darajayn QS ee jaamacadaha dunida ee hoos 50 sano.
Deakin hadda waa in hogaanka 3% jaamacadaha dunida ee mid kasta oo kamid saddex waaweyn ciidmada caalamiga ah ee rankingsAcademic Jaamacadaha Adduunka (ARWU), Times Tacliinta Sare iyo QS qiimeynta University Adduunka.
In ka 2015 Excellence in Research for Australia (ERA) darajeeyo, 89% cilmi Deakin ee lagu qiimeeyo ama ka sarreeya heerka adduunka. Shan ka mid ah cilmi-Deakin ayaa waxaa ka mid ahaa in Thomson Reuters liiska sannadlaha ah ee cilmi-ugu daliishaday in joornaalada tacliimeed, kaalinta ugu sareysa boqolkiiba hal ka mid ah cilmi ee ay duurka. The cilmi ku qoran yihiin: Alfred Deakin Professors David Crawford, Jo Salmon, Kylie Ball iyo Associate Professor Anna Timperio, oo dhan oo ka tirsan xarunta Deakin ee Activity Jirka iyo Research Nafaqada (C digsi), iyo Alfred Deakin Professor Michael Berk, Agaasimaha Xarunta Innovation in maskaxda iyo jirka iyo Caafimaadka Daaweynta Clinical (SAAMEYN).
Deakin sii wadaan in ay noqon hoggaamiyaha qaybta for qanacsanaanta graduate ah, ugu horeysay ee Victoria, waayo, sannaddii lixaad oo isku xigta ee Graduate Survey Australia (2010-15).
Kuliyada Arts iyo Waxbarashada
School of Isgaarsiinta iyo Arts Creative
Kuliyada Business iyo Sharciga
School of Jimicsiga iyo Nafaqada ee Sciences
Dugsiga Caafimaadka iyo Horumarinta Bulshada
Kuliyadda Sayniska, Engineering iyo Deegaanka dhisay
School of Naqshadaha Dhismaha iyo Deegaanka dhisay
School of Technology Information
Institute of Education Koorie
taariikhda Deakin ee
Expansion ee 1990
Dhisidda Town University a
Jaamacadda Deakin waxaa si rasmi ah u la aasaasay 1974 la marinkii oo ka mid ah Sharciga Jaamacadda Deakin 1974.
Deakin ahaa jaamacad afaraad Victoria iyo ugu horeysay ee gobolka Victoria; waxaa loo magacaabay ka dib markii hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa xiriirka Australia iyo Ra'iisul Wasaaraha labaad ee Australia, Alfred Deakin.
Laga soo bilaabo bilowga ay, Deakin ayaa qaabeeya by gool oo mataano ah:
oo diiradda la saarayo gobolka Victoria, abuuro jaamacad ee gobolka Geelong ah
ballanqaad in ballaarinta helitaanka waxbarasho jaamacadeed, gaar ahaan iyada oo loo marayo barnaamijyada waxbarashada masaafada.
campus horeysay University Deakin ayaa waxaa la aasaasay at Waurn balliyada. Jaamacadda waxay ahayd natiijada ku biirto u dhexeeya State College of Victoria, Geelong (hore Geelong Macalimiinta College) iyo Institute of Technology Gordon ah (hadda Institute Gordon ee TAFE).
Deakin ku qoran ardayda ugu horeeyay ee Campus Geelong Waurn balliyada in 1977.
Deakin ayaa la xoojiyey by taxane ah oo midoobaan, guul la-hawlgalayaasha xoog, kasta oo ka mid kuwaasoo ayaa door weyn ka qaata in dabeecadda iyo hab Deakin ee.
nidaamka waxbarashada jaamacadaha Australia ayaa maray isbedel weyn oo soo socda 1988 Warqad cad Tacliinta sare: war siyaasad, soo bandhigay by markaas Wasiirka Waxbarashada Shaqada John Dawkins.
Sida sameeyey inta badan jaamacadaha Australia waqtiga, Deakin bilowday taxane ah oo midoobaan,. Waxay ku biireen Warrnambool Institute of Education Advanced in 1990, xoojinta meel Deakin ee Degmada Western ee Victoria la Campus Warrnambool ah.
biirto A leh ugu of Victoria College ee December 1991, iyadoo xarumaha ay Burwood, Rusden iyo Toorak, siiyey Deakin cusub a joogaan xoog iyo nawaaxigeeda ee Campus Melbourne Burwood.
midoobaan, Kuwani awood University Deakin in si xooga u koraan dadka arday pre-biiriddii qiyaastii 8,000 in 1990 ku dhowaad 25,000 ardayda tacliinta sare ee 1995.
n 1990, waxaa jiray dood badan oo ku saabsan qaddar ee Geelong ee taariikhiga ah, laakiin duqoobay Dalgety ee Woolstore. Asal ahaan dhisay sida woolstores in 1893, dhismayaasha ayaa si ballaadhan loo dayac tiray si ay u abuuraan Deakin ee casriga ah iyo cajiib Geelong Waterfront Campus.
Ma rabtaa wada hadlaan University Deakin ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Jaamacadda Deakin on Map
Photos: Deakin University rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Deakin
Ku biir si ay ugala hadlaan Jaamacadda Deakin.